Odayaasha Dhaqanka oo ka digay dagaal ka qarxa Dhuusamareeb | Universal Somali TV
Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa digniin adag ka soo saaray dagaal ka dhaca Xarunta Maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Odayaasha Dhaqanka oo maanta ku kulmay Magaalada Dhuusamareeb ayaa dareen ka muujiyay dhaqdhaqaaq ciidan oo magaalada, ay ka wadaan Ciidamada Dowladda Somaliya.
Waxaa jira warar sheegaya in Ciidamada Dowladda ay qorsheynayan weerar lagu qaado Xarunta Inji ee Magaalada Dhuusamareeb, oo ah xarunta ugu weyn ee Ahlu Sunada Galmudug. Tani ayaa waxay ka dambeysay markii Madaxweyne Qoorqoor uu Axadii kormeeray Xarumaha Ciidamada Dowladda ku leeyihiin magaaladaasi.
Odayaasha Dhaqanka oo mid mid uga hadlay kulankii maanta ayaa waxay sheegeen inaanu xalka Galmudug ku jirin qori caaradii, hase ahaatee uu xalku yahay in wixii jiro wadahadal lagu dhameeyo.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in dadka reer Dhuusamareeb aanay iminka xamili karin in lagu dul dagaalamo, waxayna Dowladda Federaalka ugu yeereen inay is xakameyso, oo xabaddii Dhuusamareeb laga ridi lahaa ay mudan tahay in Shabaab lagu rido.
Dhuusamareeb ayaa waxaa mar sii horeysay siyaabooyin kala duwan loogu kala doortay laba Madaxweyne, waa mid ay taageereyso Dowladda Federaalka iyo kan kale, oo ay soo dooratay Ahlu Sunadii magaalada ka arrimineysay, kow iyo tobankii sano ee la soo dhaafay.
Tallaabada ay Ahlu Sunna, Madaxweyne ugu soo dooratay Sheekh Maxamed Sheekh Cali Xasan ayaa timid, ka dib markii ay qaadacday dhabihii ay dowladda u martay doorashadii 2dii bishan ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb.
Kan-xigaMadaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaada...
Kan-horeCiidanka Xoogga Dalka oo kaabiga ku h...
52,001,248 unique visits